रोयल नहर ग्रीनवे - IntoKildare
रोयल नहर ग्रीनवे मा स्वागत छ, एक लामो दूरी, अफ-रोड हिड्ने र साइन्क्लिंग ट्रेल Maynooth लाई Longford टाउन संग जोड्ने। १३० किलोमिटर ट्रेल आयरल्याण्डको हिडन हार्टल्याण्ड्स मा शक्तिशाली नदी शैनन तिर आयरल्याण्ड को प्राचीन पूर्व को रमाईलो हरियो परिदृश्य को माध्यम बाट बित्छ।
रोयल नहर, कहिलेकाहीँ 'Shoemaker's Canal' भनिन्छ एक कथा बाट यसको प्रारम्भिक प्रमोटरहरु को एक यस्तो शिल्प संग जोड्ने, ग्रान्ड नहर को 14 बर्ष पछि बनाइएको थियो। गिरावट को वर्ष पछि, यो अन्ततः १ 1951 ५१ मा एक वाणिज्यिक जलमार्ग को रूप मा प्रयोग गर्न को लागी बन्द गरीयो, यद्यपि अझै पनी आज सम्म फुर्सत प्रयोगकर्ताहरु द्वारा रमाईलो छ।
यस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय शहर मा Maynooth को ठीक बन्दरगाह मा तपाइँको साहसिक शुरू गर्नुहोस्, पर्खाल बगैंचा र कार्टन हाउस को demesne को नजिक र ट्रेक वा चक्र Kilcock को लागी 6km वा इन्फिल्ड र पछाडि टाढा। M4 को साथ कार द्वारा Maynooth र Kilcock को बीच मा खिच्न को लागी एक सजिलो पहुँच संग र डबलिन शहर को केन्द्र बाट लगातार बस र रेल सेवाहरु यो हिड्नेहरु को लागी एक सुविधाजनक मार्ग बनाउँछ।
कार पार्किंग Maynooth ट्रेन स्टेशन (€ 3.50 सबै दिन दर) मा उपलब्ध छ। यदि तपाइँ एक चक्र मा लिन चाहानुहुन्छ, तपाइँ हार्बर को छेउमा स्थित रोयल नहर बाइक भाडा मा एक बाइक भाडामा लिन सक्नुहुन्छ (नोट: बाइक भाडा कोविड १ to को कारण हाल उपलब्ध छैन)।
मार्ग बाट एक मोड़ लिनुहोस् भव्य १२ औं Maynooth महल, FitzGeralds को पूर्व निवास को यात्रा र शहर मा धेरै खाने ठाउँहरु मध्ये एक मा नाश्ता को आनन्द लिनुहोस्। जबकि Maynooth हार्बर barges र एक पिकनिक क्षेत्र र नजिकै खेल को मैदान संग माछा मार्ने पहुँच को लागी moorings प्रदान गर्दछ।
मेला हरियो मा कार पार्किंग उपलब्ध छ। धेरै पब वा कफी पसलहरु मध्ये एक मा केहि refreshments को आनन्द लिनुहोस्। रेल स्टेशन नहर बाट एक फिर्ती यात्रा को लागी भर मा स्थित छ, वा Enfield (13km टाढा) को लागी जारी छ।
Kilcock हार्बर १ 1982 २ मा पुनर्स्थापित गरीयो र २०१० मा डु bo्गा को लागी पुनः खोलियो। यो २०१ Can मा राष्ट्रिय क्यानो पोलो च्याम्पियनशिप को मेजबान पनि खेलीयो।
यहाँ खर्च को लागी हाम्रो सुझाव छ 24 घण्टा रोयल नहर ग्रीनवे मा वा हाम्रो गाइड को जाँच गर्नुहोस् तपाइँको रोयल नहर ग्रीनवे अनुभव को सबैभन्दा बाहिर प्राप्त गर्दै.
एक नक्शा र अधिक जानकारी को लागी, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
विरासत र इतिहास, आउटडोर, पैदल र पैदल यात्रा, ट्रेल्स, आयरल्याण्डको प्राचीन पूर्व, मेनुथ
मेनुथ, काउन्टी किल्डारे, आयरल्याण्ड.